Belo Tsiribihina : Mpanangom-bokatra maty tsy tra-drano notifirin’ny dahalo - ewa.mg
News - Belo Tsiribihina : Mpanangom-bokatra maty tsy tra-drano notifirin’ny dahalo
Nitrangana vono olona niseho tamin’ny fomba feno habibiana indray tany amin’ny Distrikan’i Belo Tsiribihina, Faritra Menabe, afakomaly alina, tokony ho tamin’ny valo ora alina tany ho any, ka mpanangom-bokatra iray antsoina hoe : Jama no maty tsy tra-drano notifirin’ny dahalo tao Beraketa. Raha ny fanazavana azo avy any an-toerana, avy tany Tsimafana hihazo ny toeram-ponenany ao Belo ity raim-pianakaviana mpanangom-bokatra ity no nisy nitifitra teny an-dalana, ka niditra teo amin’ny ila tratrany ankavian’ny ny bala, ary naraina ny andro vao hita ny razana izay nitsirara tamin’ny tany nihoson-drà.
L’article Belo Tsiribihina : Mpanangom-bokatra maty tsy tra-drano notifirin’ny dahalo a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fitantanana: mitaky ny mangarahara ireo mpiasan’ny Adema
Nilaza hametraka ny mangarahara ny mpitantana vaovao eo anivon’ny Adema. Tsy araka izany anefa ny miseho enim-bolana aty aoriana, araka ny nambaran’ireo mpiasa ka mitaky ny hijeren’ny minisitera ny olana. Eo ny nanendreny tale maromaro tao anatin’izany. Nisy ny fombafomba fotsiny satria akaiky ny tale jeneraly vaovao ny delege teo aloha ary naira-niasa tamin’ny fanilihana ny tale jeneraly teo aloha. Ao koa ireo manao asa roa tsotra izao, araka ny nambaran’ireo mpiasa hatrany. Misy ireo namoronana asa vaovao mihitsy. “Nofoanana ny fandoavana ny ora fiasana mihoatra ny fotoana ho an’ny mpiasa madinika maromaro. Toa fanaovana tsinontsinona ny mpiasa izany”, hoy izy ireo. Manampy izany ny fitarainan’ireo mpiasa fa ananan’ny orinasa vola hatrany amin’ny 100 tapitrisa Ariary ny mpitantana. “Tokony ho naveriny tsy mihoatra ny herintaona “avance sur salaire” izany. Tsy mbola tafaveriny daholo anefa raha efa tany amin’ny 2017 tany ho any no nitranga. Mametraka fanamby mangarahara anefa ny tenany”, hoy izy ireo.Synèse R. L’article Fitantanana: mitaky ny mangarahara ireo mpiasan’ny Adema a été récupéré chez Newsmada.
Fanenjehana fandikan-dalana :: Hihamafy ny fisavana an’ireo fiara mitondra laharana vahiny
Hanao hetsika manokana ho fitsirihana sy fisavana an’ireny fiara mitondra laharana vahiny ireny, manomboka amin’ny 21 septambra ho avy izao, ny eo anivon’ny Foibe fitsarana fiarakodia (DGSR), miaraka amin’ny mpitandro filaminana. Ho fanamafisana ny fanenjehana amin’ny fandikan-dalàna momba ny fampiasana laharana tsy ara-dalàna no anton’izany hetsika izany. « Tsikaritra ny fahamaroan’ny fiara mitondra ny laharana vahiny na avy any ivelany, izay mety ho noho ny tsy fahatomombanana arataratasy na ny tsy fananana taratasy mihitsy sady fialana amin’ny fitsirihana ny fiara. Miseho amin’ny endrika maro samihafa anefa ny fandikandalàna momba ny fampiasana laharana tsy ara-dalàna », hoy ny kolonely Rasambomanana Yvon Patrik, talen’ny hetsika an-dalambe ao amin’ny DGSR. Efa nisy ny hetsika natao teto an-drenivohitra sy ny manodidina, tao anatin’ny herinandro, ka nahitana fiara 27 mitondra laharana vahiny tsy ara-dalàna. « Omena roa herinandro hahafahana mikarakara ny taratasy eny amin’ny Ivon-toerana fitsarana fiarakodia ireo manana laharana fiara tsy ara-dalàna. Fisintonana ny taratasin’ny fiara na fampidirana vala famonjana no fepetra raisina ho an’ireo tsy manara-dalàna », hoy kosa ny kapiteny Razandrinirinjoky Jonah Honoré, lehiben’ny sampana misahana ny fitsirihana ny hetsika an-dalambe ao amin’ny DGSR ihany. L’article Fanenjehana fandikan-dalana :: Hihamafy ny fisavana an’ireo fiara mitondra laharana vahiny est apparu en premier sur AoRaha.
Rugby – Lalao fanomanan-ena: nifanandrina ny Mang’Art sy ny FTM Manjakaray
Eo am-piandrasana ny fanombohan’ny fifaninanana federaly ny “Top 20”, taranja rugby, niatrika lalao firahalahiana sady nitsapana ireo mpilalao ao aminy avy, ny FTM (Dakar) sy ny Mang’Art, samy avy amin’ny fileovana Manjakaray. Fihaonana notanterahina, tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena, omaly alarobia 19 mey. Tsy ny vokatra loatra no zava-dehibe teo amin’ireo mpanazatra fa ny fijerena ny fahaiza-miaraka ho an’ireo mpilalao vaovao nantsoina, hanatevina ny andaniny sy ny ankilany.Ankoatra izay, notarafina tamin’ilay lalao tsapa ihany koa ny fampiharan’ny mpilalao ny taktika nomena an-dry zalahy, nandritra ny fanazarantena. Na izany aza, hita ny mbola maha zoky sy ny traikefa nananan’ny FTM Manjakaray, notarihin-dry Mika sy ry Lahatra. Marihina fa anisan’ireo mpilalao vaovao, ho an’ny Dakar, i Julio sy i Hery ary i Matfield, avy amin’ny Cnaps Sport.Hita ho manana ny fahaiza-manao ireo mpilalaon’ny Mang’Art, saingy tsy ampy fihaonana. Tsiahivina fa mbola nitarika ity ekipan’i Mang’Art ity i Tor. Antso ataon’ireo mpitantana eo anivon’ireto fileovana roa tonta ireto ny tokony hanombohan’ny fifaninanana satria sady lany vola amin’ny fanomanana izy ireo no vizana amin’ny kotrana fotsiny ireo mpilalao. Azo tanterahina, tsy misy mpijery toy ny “Orange pro league” amin’ny baolina kitra, ny fifaninanana, raha toa ka mangataka alalàna amin’ny fanjakana ny Malagasy rugby, araka ny fnambaran’izy ireo. Torcelin L’article Rugby – Lalao fanomanan-ena: nifanandrina ny Mang’Art sy ny FTM Manjakaray a été récupéré chez Newsmada.